अब राजा ज्ञानेन्द्र शाहले नासो फिर्ता लिने बेला आयो ! – Himalitimes
अब राजा ज्ञानेन्द्र शाहले नासो फिर्ता लिने बेला आयो !
२०७७ चैत्र ११ ०९:१२ मा प्रकाशित
राजा ज्ञानेन्द्र शाह त्यागी हुन उनले आजसम्म राजगद्दी त्याग गरी बसे । अब राजा ज्ञानेन्द्र शाहले नासो फिर्ता लिनुपर्ने समय आएको छ । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको नाममा मनपरि, लुटन नपाउने र राज्यकोष ढुकुटी दुरुपयोग गर्न नपाउनेहरुले मात्र राजा र सेनाहरुको विरोध गर्छन ।
पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरू मुलुकको हित, जनहित, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रका लागि भुमिगत भएका होइनन । मुलुकमा आतंक सिर्जना गरी लुटन नपाएर आफ्नो स्वार्थका निम्ति सत्तामा जान भुमिगत भएका हुन । मनपरि गरि सत्तामा गएर लुटनका लागि राष्ट्रिय संरचनाहरु समेत ध्वस्त पारे । नेपाली सेनाहरु माथि आक्रमण गरे । लडाकुहरुको पैसा समेत खाइदिए । क्रान्तिको नाममा उदेश्य सत्ता प्राप्ति र बिलासीता जीवन बिताउने मात्र भयो ।
नेपाली जनताहरु सत्ताका पुजारी, दहीचिउरे, ताक परे तिवारी नत्र गोतामे जस्ता अवसरवादी र स्वार्थी छन । तुलना गर्दा को ठिक र को बेठीक मुल्यांकन गर्न नसक्ने नेपाली जनताहरु छन । मासु भात, रक्सी र भत्तामा बिकाउ छन । मुलुकको अस्मितालाई छोडी दिउँ । बेच्न पाए भने आफ्नो आमा, छोरी , बेटी र दिदिबहिनीहरु लाई समेतलाई बेच्न पछि पर्दैनन । के वास्तविक रूपमा विक्रम सम्वत २०६२/०६३ सालपछि मुलुकले पाउनुपर्ने निकास पाएको छ ? मुलुकलाई आजको अवस्था सम्म ल्याउन जिम्मेवार र दोषीहरु नै नेपाली नागरिकहरु हुन ।
नेपाली नागरिकहरु ताक परे तिवारी नत्र गोतामे जस्ता स्वार्थी र अवसरवादी छन । विक्रम सम्वत २०६२/०६३ साल बाट आजसम्म समीक्षा गर्दा मुलुकमा नेताहरू नै निरंकुश हो भन्ने कुरा प्रमाणित भएको अवस्था छ । नेताहरूको तुलनामा राजा ज्ञानेन्द्र शाह त्यागी हुन राजगद्दी त्याग गरे । यसकारण अब राजा ज्ञानेन्द्र शाह र सेनाहरु मिली मुलुकको कार्यभार संभाल्नुपर्छ ।
नेपाली सेनाहरु जति प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्रवादी र भित्र भित्रै गोप्य रूपमा सेनाहरु राजनीतिक दलहरु प्रति आस्था भएपनि सेनाहरु नेताहरूको लागी मरिहत्ते र मरिमेटे पनि राजनीतिक दलहरुका नेताहरूको सोच शाही सेनाहरु अर्थात राजाको नै सेनाहरु हो भन्ने रहेको पाइएको छ ।
प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रवादी हुनु नराम्रो होइन तर हाम्रो मुलुकका नेताहरूबाट नै मुलुकमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको दुरुपयोग गरियो । दलीय व्यवस्था उत्कृष्ट व्यवस्था हो हाम्रो मुलुकमा दलीय व्यवस्थालाई खाने पेशा बनाई बार्गेनिङ गर्ने व्यापार गर्ने थलो बनाइएकोले हाम्रो मुलुकमा दलीय व्यवस्था अफाब सिद्ध भएको छ ।
अन्तर आत्मालाई साक्षी राखी वास्तविक रूपमा साच्चिकै भन्नुपर्दा विक्रम सम्वत २०६२/०६३ सालपछि मुलुकले निकास पायो सोच विचार र मनन गरौं ? यसकारण अब राजा ज्ञानेन्द्र शाह र सेनाहरु मिली मुलुकको कार्यभार सम्भाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
अब आन्दोलनबाटै राजसंस्थासहितको हिन्दु अधिराज्य पुनःस्थापना : डा.मनोज कुमार झा